निर्मला हत्या प्रकरण : सरकारी वकिलसामु के भनेका थिए विष्टले? यस्तो थियो उनको बयान [भिडियो]
नारायण अधिकारी | २०७६ बैशाख ४ बुधबार | Wednesday, April 17, 2019 १५:१०:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं– निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको ९ महिना पुग्न लागिसक्यो। तर, हत्यारा रहस्यको गर्भमै छ। थुपै अनुसन्धान टोलीलाई माथ खुवाउने यो घटना नेपाल प्रहरीका लागि घाँटीमा अड्किएको ठूलो हड्डी जस्तै भएको छ। न त भित्र नै पस्न सकेको अवस्था छ, न बाहिर निकाल्न सकिएको छ। जसकारण यसको चौतर्फी आलोचनामा सिंगो प्रहरी संगठन नै मुछिएको छ।
सोही प्रकरणमा कतिपय प्रहरी अधिकारीले जागिरबाटै हात धुनुपर्‍यो। कतिपय महिनौं बितिसक्दा समेत निलम्बनको सिकार भइरहेकै छन्।
अनुसन्धान गर्दागर्दै जागिर नै जाने अवस्था आउनु र निलम्बनमै पर्नुपरेपछि यसले अपराध अनुसन्धानमा दीर्घकालीन असर पर्ने विज्ञहरु बताउँछन्। ‘गुड फेथ’ रहेर काम गर्दागर्दै यस्तो अवस्था आउन थालेपछि जोखिम अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई गाह्रो हुने विज्ञहरु बताउँछन्।
प्रहरी अधिकारीको जागिर नै खोसिने र निलम्बन बनाउनेसम्म भएको यो चर्चित घटनाको केही पाटा अझै पर्दापछाडि नै छन्। प्रमाण नष्ट गरेको, निर्दोषलाई फसाउन खोजेको, अभियुक्तलाई यातना दिएको, कुशल ढंगले जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको जस्ता आरोप अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीलाई लाग्दै आएको छ।
यो घटनामा दिलीपसिंह विष्ट एक यस्तो पात्रका रुपमा खडा भए, जसलाई प्रहरीले अपराधी करार गर्‍यो। प्रहरीले यातना दिएर अपराध स्विकार्न लगाएको समेत भनिएको छ। तर विष्टलाई नै अपराधी बनाउनु पर्ने कारण चाहिँ के हो? यसको उत्तर खोज्ने प्रयास गरिएको छैन। बिनाप्रमाण यस्तो आरोप खेप्नुपरेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी नै बताउँदै आएका छन्।
प्रहरीले यातना दिएर विष्टलाई अपराध स्किार्न लगाएकै हो त ? तर यसको पर्याप्त कारण कोहीसँग पनि छैन। तर विष्टले प्रहरीसमक्ष मात्रै होइन सरकारी वकिल समक्ष समेत निर्मलाको हत्या आफैले गरेको बताएका थिए। जुन भिडियो नेपाल लाइभले फेला पारेको छ। नेपाल लाइभलाई प्राप्त भिडियोमा विष्टले हत्या आफैंले गरेको स्विकार गरेका छन्।
विष्टलाई पक्राउ गरिसकेपछि म्याद थप गर्दै प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। सोही क्रममा एक दिन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता खेमराज भट्टले समेत आरोपित विष्टको बयान लिएका थिए।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा उनले विष्टलाई केही प्रश्न सोधका थिए। जहाँ विष्टले निर्धक्क हत्या आफैंले गरेको बताएका छन्।
उनले बयानमा भनेका छन्-
‘साइकल बनाइदिम् भनेर चिँ हेन्डल समातेँ। हेन्डलको भित्रबाट पसौं भनेर चाहिँ.. चेन कभर त बीचमा हुन्छ नि! यस्तरी समातिराख बहिनी भनेँ मैले तिनलाई। हेन्डिल, चक्कालाई बीचमा पारेर अगाडिबाट यसो समात भनेँ। उनले यसो समातिन्। तर सिधै चलाउने। यसरी घुडाँ चढाऊ भनेँ..। तर मेरो शरीर दूधमा लाग्यो तिनको। तर तिनले केही भनेन। बहिनी यता आउन भनेँ। यता आयो। …त्यसपछि खोलाको तल साइकल फालिदिए। साइकलमा किताब पनि थियो। त्यसपछि तानेर उनलाई पारि लगेँ। घाँटी थिचेर मारेँ। यस्तरी अँगालोमा बोकेर लगेर उखुझाडीमा फालेँ।’
सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ताले समेत केही प्रश्न त्यसबेला विष्टलाई सोधेका थिए। उनकै अगाडि विष्टले निर्मलालाई आफूले मारेको कहानी बताएका थिए।
तर सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता भट्टले साबिती बयान भने गराएनन्। त्यसबेला कञ्चनपुर लगायतका जिल्लामा आन्दोलनले उग्र रुप लिएको थियो। निर्दोष विष्टलाई प्रहरीले फसाउन खाजेको भन्दै आन्दोलन एकाएक चर्कियो। त्यसैको असर हुन सक्छ आफ्नै अगाडि हत्या गरको स्वीकार गर्दा पनि न्यायाधिवक्ता भट्टले विष्टको साबिती बयान गराउन तयार भएनन्। पछि प्रस्ट प्रमाण पुग्ने भिडियो समेत अदालतमा पेस गरिएन।
‘मेरो मानसिक सुन्तलन ठिक छ’
बलात्कार र हत्यामा संलग्न दोषी उम्काउन मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको विष्टलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर फसाउन लागेको भन्दै आलोचना समेत भयो। मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको व्यक्तिले कसरी हत्या गर्‍यो? कसरी शव व्यवस्थापन सहजै गरिदियो? जस्ता प्रश्न समेत गरिएका थिए। तर विष्ट स्वयंले सरकारी वकिलसमक्ष दिएको बयानमा आफ्नो मानसिक सन्तुलन ठिक भएको बताएका छन्।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा लिएको बयानको पहिलो प्रश्नमा नै उनलाई सोधिएको थियो, ‘तपाईंको शारीरिक एवं मानसिक अवस्था कस्तो छ? सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुहुन्छ कि हुँदैन?’
‘मेरो शारीरिक एवं मानसिक अवस्था ठिक छ। सोधिएका प्रश्नको जवाफ स्वतन्त्रपूर्वक दिन सक्छु,’ उनले भनेका थिए।
प्रहरीले यातना दिएकै हो?
विष्टलाई यातना दिएको भन्दै उनका दाजुले जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा मुद्दासमेत दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दाका आरोपित प्रहरीलाई जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले धरौटीमा समेत रिहा गरिसकेको छ। एसपी दिल्लीराज विष्ट १० लाख, डिएसपी अंगुर जिसी ९ लाख र अन्य प्रहरी अधिकारीले पनि धरौटी रकम तिरेर रिहा भइसकेका छन्।
तर जिल्ला सरकारी वकिलकै कार्यालयमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी निरीक्षक एकेन्द्र खड्काले लिएको बयानमा विष्टले आफूलाई कुनै यातना नदिइएको बताएका छन्।
बयानको ४ नम्बर बुँदामा विष्टलाई सोधिएको थियो, ‘प्रस्तुत मुद्दामा प्रहरीले तपाईलाई पक्राउ गर्दा वा तपाईं प्रहरी हिरासतमा बस्दा कुनै कसैबाट यातना पाउनुभएको छ कि छैन? खुलाइदिनुहोस्।’
विष्टले जवाफमा भनेका छन्, 'प्रस्तुत मुद्दामा प्रहरीले मलाई पक्राउ गर्दा वा प्रहरी हिरासतमा बस्दा कुनै कसैबाट शारीरिक तथा मानसिक यातना पाएको छैन।’
'तपाईंलाई कसैले करकाप लगाएर अपराध स्विकार्न लगाएको छ?' भन्ने आसयको प्रश्नमा दिलीपसिंह विष्टले ‘प्रस्तुत मुद्दामा मबाट बयान लिँदा कुनै करकाप लगाएको छैन’ भनेर जवाफ दिएका छन्।